Akụkọ - 2020 Global Baby Stroller na Stroller Market Analysis, Typedị, Ngwa, Amụma na COVID-19 Impact Analysis 2025
Ahịa nwa ọhụrụ na ahịa na-aga ahịa na 2020, nke ndị nrụpụta, mpaghara, ụdị na ngwa mebiri, na-ebu amụma mmetụta kacha mma kachasị mma, usoro njikọta na teknụzụ kachasị ọhụrụ na 2025. Akụkọ ahụ na-akọwapụta ma na-akọwa akụkụ ahịa ọ bụla iji nyochaa ihe mgbagha dị mma, nke nwere setịpụrụ ụzọ mmụba nke ahịa ụmụaka na ahịa ụmụaka. Akụkọ ahụ mere nyocha sara mbara banyere usoro ahịa ahịa ma nyochaa ngalaba ahịa dị iche iche na ngalaba nke ụlọ ọrụ ahụ. Site n’enyemaka nke akụkọ a, ndị na - agụ akwụkwọ ga - enwe ike ikpebi ikpe ga - aba na njedebe nke ihe ndị a kpọtụrụ aha n’elu, nke na - aga n’ihu n’ihu n’ahịa ụwa. Site na akwụkwọ nyocha a, ọ ga-adị mfe ịmebe ma bulie ọkwa ọ bụla nke usoro mmepụta ihe gụnyere nsonye, ​​nnweta, njide na monetization.
Nkwupụta ahụ na-ekewa ndị na-agba ọsọ ahịa na ahịa zuru ụwa ọnụ n'ọtụtụ ngalaba ahịa dị mkpa dabere na njirimara, ọrụ, ngwa na ụdị. Ozi a ga - enyere ndị mbata ọhụrụ na ndị na - egwu egwu aka ịghọta usoro niile nke ahịa ma nweta ozi gbasara ngwaahịa na ọrụ dị iche iche dị na ahịa ahụ. Nkwupụta ahụ nwekwara ozi zuru ezu na ngalaba ahịa dị mkpa nke nwere ike iduga ma ọ bụ chụọ ahịa niile n'oge oge amụma site na 2020 ruo 2025. Akụkọ ahụ na-ekpuchikwa mmebi mpaghara nke ahịa. Obi abụọ adịghị ya na ụlọ ọrụ na-adabere kpamkpam n'akụkụ ahịa dị iche iche nke akụkọ nyocha ahịa kpuchiri, yabụ akwụkwọ a na-enye ha nghọta ka mma iji chụpụ ụlọ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. A na-ahụkwa njirimara ndị a na-ahụkarị maka nkewa, dị ka òkè ahịa ụwa, ọdịmma ndị mmadụ, ọchịchọ ụwa, na ịnye ndị na-agagharị agagharị.
Mara: Akụkọ anyị na-elekwasị anya na isi nsogbu na ihe ọghọm ndị ụlọ ọrụ nwere ike ibute n'ihi ntiwapụ a na-enwetụbeghị ụdị COVID-19.
Ndị isi egwuregwu na-arụ ọrụ n'ahịa zuru ụwa ọnụ na ire ere ahịa: Goodbaby, Mybaby, Artsana, Combi, BBH, Seebaby, Emmaljunga, Shenma Group, Newell Rubbermaid, Aing, Dorel, UPPAbaby, ABC Design, Hauck, Stokke, Peg Perego, Roadmate
Ekewapụrụ ahịa site n'ụdị, ngwaahịa nwere ike kewaa: otu stroller, otutu strollers, strollers
Ahịa nkewapụtara site na ngwa na-ekewa n'ime: n'okpuru 1 afọ, 1 ruo afọ 2.5, yana karịa 2.5 afọ
Dabere na nkewa mpaghara, e kewara ahịa ahụ na mpaghara ndị a: North America (United States, Canada, na Mexico), Europe (Germany, France, United Kingdom, Russia, na Italy), Asia Pacific (China, Japan, South Korea, India, na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia), South America (Brazil, Argentina, wdg), Middle East na Africa (Saudi Arabia, Egypt, Nigeria na South Africa)